Ekele dịrị Samsung Copilot ngwa, anyị ga-ezere ịda n'ụra | Akụkọ akụrụngwa
Ekele dịrị Samsung Copilot ngwa, anyị ga-ezere ịrahụ ụra na wiilị
Na Spain, iro ụra na-ebugharị bụ otu n'ime ihe na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% nke ihe mberede okporo ụzọ na-eme na mba anyị. N'ezie, ihe karịrị 55% nke ndị ọkwọ ụgbọ ala Spain na-ekwu nke ahụ ịkwọ ụgbọala n'agbanyeghị mgbaàmà nke ụra, yabụ na ịnwere nnukwu ihe ọghọm ị nwere ihe mberede ma ọ bụrụ na ịnweghị usoro kwesịrị ekwesị mgbe ị na-anya ụgbọ ala.
Izu ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere okpu nke Ford zubere ire ahịa n'ọdịnihu maka ndị ọkwọ ụgbọala, okpu nke na-enyocha ọnọdụ nke isi n'oge niile na mmegharị ya n'ihi gyroscopes wuru n'ime ya. Oge ọ chọpụtara na ọkwọ ụgbọala na-egosi ihe mgbaàmà nke ihi ụra, ọ malitere emit a oké ụda esonyere a na-enwu gbaa.
Ọ bụrụ na emechara ọrụ a, n'oge ahụ ọ bụ ihe omimi, mana ọ bụghị naanị azịza anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa. Companylọ ọrụ Korea bụ Samsung gosipụtara ngwa Samsung Copilot, ngwa maka wearable nke ụlọ ọrụ chọrọ iji nyere aka belata ihe mberede okporo ụzọ n'ihi ike ọgwụgwụ na ụra. Wearables aghọwo ngwaọrụ na-ejikarị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ eme ihe, ngwa a bụ a oké ohere iji nweta ihe na ya.
1 Olee otu Samsung Copilot si arụ ọrụ
2 Lụọ iro ụra na wiil
3 Samsung Copilot Ndakọrịta
Olee otu Samsung Copilot si arụ ọrụ
E mepụtara ngwa Samsung Copilot na mmekorita ya na Grouplọ Ọrụ Nchọpụta nke Schoollọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Nkụzi na Nkà na oflọ Akwụkwọ nke International University of La Rioja, nke Prọfesọ Sergio Ríos duziri. Ngwa a na-amụ n'oge niile onye ọrụ ụzọ nke ịnya ụgbọ ala yana ngwakọ ọkwọ ụgbọ ala na-ezu ike, iji nwee ike ịdọ anyị aka na ntị mgbe anyị hapụrụ ụkpụrụ ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, si otú a na-ewepụ echiche ụgha. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịchekwa nọmba ekwentị ịkpọtụrụ, nke mere na n'oge ihe mberede, anyị nwere ike ịkpọ ngwa ngwa site na nkwojiaka anyị, ọ bụrụ na anyị enweghị ohere nke anụ ahụ ruo na njedebe.
Ozugbo ngwa ahụ debanyere ngwongwo onye ọkwọ ụgbọala ma mara ihe usoro ịkwọ ụgbọala ya dị, ngwa ahụ na-ahụ maka ịtụle mmegharị nke ogwe aka ekele maka ihe mmetụta dị iche iche nke smartwatches na-etinye dị ka ihe mmetụta ụda obi, gyroscope, accelerometer na pedometer, ịchọpụta ma ọ bụrụ na achọpụta ihe ọ bụla site na usoro edebanyere na ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ikpe ahụ emee, ngwa ahụ ga-amalite iji nwayọ na-eme ka onye ọkwọ ụgbọ ala mara ihe egwu ha na-agba.
Ozugbo anyị wụnye ngwa na smarwatch, anyị ga-emeghe ya na oge nke na ngwa nwere ohere niile sensọ nke ngwaọrụ na nke mere na ọ na-emekwa ka a mmesho nke anyị usu na-ezu ike. Ọzọ, ọ ga-arịọ anyị ka anyị nwee ike ịkpọ oku ekwentị ma ọ ga-ajụ anyị ka anyị tinye nọmba ekwentị ọ bụrụ na mberede. Ozugbo emechara nhazi ahụ, a ga-egosipụta menu isi, nke nwere nhọrọ 4: Ọnọdụ ụgbọ ala, Ntọala, Usoro ọrụ na Exzọ ọpụpụ.
Site na ịpị na ọnọdụ ịkwọ ụgbọala ngwa ahụ ga-akpọ anyị oku ejila smartwatch mgbe anyị na-eji ngwa ahụ. Mgbe ahụ, a ga-egosipụta akara ngosi analog na oge, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlele oge n'oge ọ bụla ọ ga - amalite ịrụ ọrụ, na - adọ anyị aka na ntị site na ịma jijiji na anyị na - agba ọsọ nke ịrahụ ụra, na - akpọ anyị ka anyị budata n'okporo ụzọ maka nwa oge.
Lụọ iro ụra na wiil
N'ụbọchị ndị a, ọnụọgụ nke njem n'okporo ụzọ na-abawanye yana ọnụ ọgụgụ ọtụtụ nri nri anyị na-eme iji gbaa Krismas, Afọ Ọhụrụ, Afọ Ọhụrụ, ọbịbịa nke ndị eze ... Ihe ọ bụla dị mma iji zute Ezinyere Ezinne okpokoro ma rie ezigbo nri. Ma ọ bụrụ na anyị ga-ebu ụgbọ ala iji gaa njem, anyị kwesịrị iburu n'uche na ụdị nri a, sbụ ndị njem kacha njọ anyị nwere ike ịchọta.
Mana na mgbakwunye, anyị ga-eburukwa n'uche mgbe anyị na-eme njem dị ogologo, zuru ike ma ọ dịkarịa ala kilomita 200 ọ bụla ma ọ bụ awa abụọ ọ bụla, iji pụọ n'ụgbọala, hichaa onwe anyị, nwee kọfị ma gbatịa ụkwụ anyị. Ọ dịkwa mma ka ị ghara itinye ikpo ọkụ nke otu ihe ahụ zuru ezu, karịsịa n'oge oyi, ebe ọ bụ na kpo oku na nri nri ha na-akpali anyị imechi anya anyị ngwa ngwa.
Mgbe ọ bụla enwere ike, ọ ga-adị mma ma gị na ya nwee mkparịta ụka ka anyị wee dọpụ uche anyị oge niile, gee egwu, na-a energyụ ike ma ọ bụ ihe ọ cafụ cafụ caffeinated na karịa ihe niile, na-etinye azụ dị ka o kwere mee, ka anyị enweghị ike ịbanye n'oche onye ọkwọ ụgbọala, ya mere, ọ bụrụ na obi erughị anyị ala, anyị agaghị enwecha ụra ụra.
Site na mwepụta nke Samsung Copilot, ụlọ ọrụ Korea na-etinye otu ihe ọzọ ga-enyere anyị aka izere nke ahụ n'oge njem anyị n'ụgbọ ala, anyị nwere ike na-ata ahụhụ ụfọdụ ụdị nsogbu metụtara ụra. N'ezie, nde ndị ọkwọ ụgbọala iri na asaa enweela ụra n'ụra, nke ihe karịrị nde 17 nwere nrọ ọhụụ, dị ka akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na Spanish Foundation for Road Safety, ya mere, ọ bụghị ihe nzuzu na a ga-ewere ya nke ọma. M chịrị ọchị.
Samsung Copilot Ndakọrịta
N'oge ahụ, a na-eji ngwa a maka ma ihe ejiji jikwaa site na Tizen dị ka ụdị jikwaa gam akporo Wear, ma n’oge na-adịghị anya ọ ga-abụkwa maka Apple Watch.
Developer: Samsung Eletrọniki Iberia SAU
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ekele dịrị Samsung Copilot ngwa, anyị ga-ezere ịrahụ ụra na wiilị
Xiaomi Mi A1 enweelarị gam akporo 8.0 Oreo
LG weputara TV nke 88 nke mbụ na 8k OLED mkpebi